Apple inogona kusanganisira USB-C kune iyo iPhone 15 ichiti zvakanaka kuMheni | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 12/05/2022 19:00 | iPhone, Noticias
Iyo inobatanidza mheni Yakauya ku iPhone 5 uye kubvira ipapo yanga iri yekubatanidza inoshandiswa mune ese maPhones uye iPads kusvika pakusvika kwe USB-C pa iPad. Apple haina kumbobvira yatora dambudziko rekuunza iyi Universal yekubatanidza kune yayo mobile terminal. Zvakadaro, European Union nemamwe masangano epasi rose ari kuisa kumanikidza kwakasimba paApple nemamwe makambani kuti agadzirise USB-C mumidziyo yavo mandatory. Izvi zvinogona kunge zvakakurudzira shanduko inogona kuuya pa iPhone 15. Zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino, iyo iPhone 15 yaizoona mwenje muhafu yechipiri ya2023 inogona kunge iri yekutanga iPhone ine USB-C munhoroondo.
USB-C inogona kusvika ku iPhone 15 mushure memakore anopfuura gumi nemheni
Iyo Mheni yekubatanidza yakauya ku iPhone 15 muna 2012 uye kubva ipapo maPhones ese akazvitakura. Ichi chinongedzo chakabvumira kuendeswa kwedata uye yazvino uye yakagadzirwa neApple. Pamberi peMheni isu takanga tine 30-pini yekubatanidza kubva kuApple iyo yakapa nzira kune iyo 6-pini yeiyo nyowani yekubatanidza. Imwe yemabhenefiti makuru ekubatanidza yaive iyo reversibility.
Zvisinei, kwemakore akati kuti zvino Pane kumanikidzwa kubva kuEuropean Union, pakati pemamwe masangano, kubvisa Mheni kubva kuApple zvigadzirwa. Iyo imwe nzira, sezviri pachena, ingave homogenization yezvibatanidza kuburikidza ne USB-C, yatovepo pane mamwe iPads anotengeswa neapuro hombe.
Iyo yekutanga iPhone ine USB C port kumusoro kwekutengesa uye mabheti anoenda kumadhora zana
Ongororo yangu yazvino inoratidza kuti 2H23 nyowani iPhone ichasiya Mheni chiteshi uye ichinjira ku USB-C port. USB-C inogona kuvandudza kufambisa kwe iPhone uye yekuchaja kumhanya mumagadzirirwo ehardware, asi iwo ekupedzisira madheti anoramba anoenderana nerutsigiro rweIOS.
— Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) Dai 11, 2022
Kupuruzira kwakatangwa neEuropean Union kunogona kuita kuti Apple igadzire iPhone ine USB-C ichisiya nyika yese iine Mheni yekubatanidza. Zvakadaro, Ming Chi Kuo, muongorori ane mukurumbirainovimbisa kuti USB-C inosvika pa iPhone 15 muhafu yechipiri ya2023.
Kunyangwe zvisinga jekese zvakanyanya, zvinoita sekunge Apple ingadai yakasiya kuseri kwezvipingamupinyi zvekusaunza USB-C. Pakati pezvipingamupinyi izvozvo pakanga pane nguva yekuchaja uye chitupa chekudzivirira mvura kwemudziyo. Kubatanidzwa kweichi chinongedzo chitsva uye kuoneka kwemheni kwaizove shanduko munhoroondo yeApple, sekuonekana kwaita bhatani reKumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple inogona kubatanidza USB-C kune iyo iPhone 15 ichiti zvakanaka kune Mheni